Ny lalana efa tery, eo ny fanamboaran-dalana amina faritra maro eto Antananarivo.
Mbola misy ihany ny taksibe manondrana misongona sy misisika. Lasa miteraka fitohanana satria maty avy hatrany ny lalana. Mbola tena maro ny mpamily taksibe mila fampianarana eto an-drenivohitra, misy ihany koa angamba no efa mila saziana satria tena manohintohina ny fahafahan’ny hafa mivezivezy sady tsy manaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
Roa volana aty aoriana vao fantatra fa 51 072 taonina ny vary nohafaran’i Madagasikara tamin’ny volana martsa 2019 teo ka vary mora ny 16 500 taonina tamin’ireo.
Niha mafy ny fampielezan-kevitra tamin’ity herinandro ity izay faradoboka moa satria ny alatsinainy 27 mey no hotanterahana ny fifidianana solombavambahoaka. Efa mihetsika amin’ny fitetezana tanàna miaraka amin’ny Sono mobile avokoa, eny fa na dia ireo kandida tsy dia re feo firy aza tany am-piandohana.
FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA ENY ATSIMONDRANO
Azo antoka fa ho goavana ny fitohanan’ny fifamoivoizana amin’ny tapany atsimon’Antananarivo mihazo an’i Tanjombato manomboka anio satria hisy ny Foara iraisam-pirenena (FIM) tanterahana eny amin’ny “Forello Expo” Tanjombato mandritra ny 4 andro. Anio amin’ny 10 ora maraina ny lanonam-panokafana.